आत्मबलको दियो बचायौं भने जोखिमलाई जित्न सक्छौं – डा. रवीन्द्र पाण्डे Canada Nepal
काठमाडौं - नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको अवस्थामा डा. रवीन्द्र पाण्डेले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र बच्ने बिभिन्न उपायहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिइरहेका छन् ।
यस्तै डा. रवीन्द्र पाण्डेले भारतमा संक्रमणले भयाबह स्थिति आएको भन्दै त्यहाँको संक्रमित र मृतकको संख्या गनेर हामी आत्तिनु नहुने बताएका छन् । उनले आत्मबलको दियो बचाएमा जोखिमलाई जित्न सकिने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन् - छिमेकी देश भारतमा संक्रमणले भयाबह स्थिति आएको छ । त्यहाँको संक्रमित र मृतकको संख्या गनेर हामी आत्तिनु हुँदैन । बेड प्याक भए, अक्सिजन सकिन लाग्यो, केटाकेकेटीलाई बचाउन गाह्रो पर्ने भयो, अब के होला ? कतै ब्राजिल र भारतको अवस्था हुने त होइन ? यस्ता कुरा मनमा राखेर त्रास तथा असुरक्षा महशुष नगरौं । भाइरसको हजारौं / लाखौँ पटक म्युटेसन हुनसक्छ । यो भाइरसको स्वभाव हो । धेरै म्युटेसन हुँदैमा घातक हुन्छ भन्ने छैन । कोरोना भाइरस आफै हावामा उडेर हामीलाई संक्रमित गर्दैन । हामीलाई संक्रमित जनावर तथा चराले पनि सार्दैनन् । हामीलाई संक्रमण सार्ने हाम्रै आफन्त, साथीभाइ तथा सहकर्मीले नै हो । आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिहरुसंग पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सुरक्षित हुने हाम्रै हातमा छ ।
इटली, न्युयोर्क, लन्डन, ब्राजिल, बुहान, भारत लगायतका देशमा पनि सबै संक्रमित भएका थिएनन् . संक्रमित भएका ९० % लाई अस्पतालको आवश्यकता परेको थिएन । अस्पताल भर्ना भएकामध्ये ९८ % निको भएर फर्किएका थिए . गतसाल हाम्रो देशमा पनि मृत्युदर जम्मा ०.६ % रहेको थियो । तसर्थ समाचारको कारण त्रसित नबनौं . हामी आत्तियौं भने बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ ? त्यो बुझौं । प्राकृतिक बिपत्ति तथा महामारीमा आत्मबल तथा मानसिक अवस्था बलियो हुनुपर्दछ । बलियो आत्मबलले सम्भावित जोखिमको योजना बनाउँछ । त्यो योजनाले हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याउंदैन । संक्रमण भएपनि आत्मबलको दियो बचायौं भने जोखिमलाई जित्न सक्छौं ।
हरेक हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने हो भने जतिसुकै खतरा प्रजातिको भाइरस आएपनि हामीलाई संक्रमण गर्दैन । संक्रमण गर्न नपाएपछि भाइरस स्वतस् निष्क्रिय हुँदै नष्ट हुन्छ ।
बैशाख ११, २०७८ शनिवार १९:०३:०१ बजे : प्रकाशित